Maxaa ka jira in madaxweyne Cali Guudlaawe uu xabsi guri ku yahay Beledweyne? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka jira in madaxweyne Cali Guudlaawe uu xabsi guri ku yahay...
Maxaa ka jira in madaxweyne Cali Guudlaawe uu xabsi guri ku yahay Beledweyne?
Beledweyne (Caasimada Online) – Waxaa saacadihii u dambeeyay soo baxayay warar sheegay in madaxweynaha HirShabelle Cali Guudlaawe laga hor istaagay inuu u safro magaalada Johwar, una xabsi guri ku yahay Beledweyne.
Sarkaal ka tirsan madaxtooyada HirShabelle ayaa waxa uu Caasimada Online u xaqiijiyay in wararkaas yihiin been abuur, ayna faafinayaan dad ujeedo gaar ah leh, taasi oo looga sii darayo xiisada magaaladaas ka taagan.
Waxa uu sheegay in madaxweyne Guudlaawe uu si caadi ah u wato howlihiisa shaqo, islamarkaana uusan jirin safar laga hor istaagay oo uu ku tagi lahaa Jowhar.
“Madaxweyne Guudlaawe waxa uu Beledweyne u yimid howlo, ayada oo aysan u dhamaan howlahaas kama tagayo. Waxa uu ku howlan yahay doorashada inta dhiman in la dhameystiro,” ayuu yiri.
Guudlaawe ayaa dhawaan si adag uga horyimid qorshe ay wateen kooxda Farmaajo, kaasi oo ahaa in kuraasta doorashadoodu ku harsan tahay Beledweyne loo xiro dad gaar ah, sida hore u dhacday.
Madaxweynaha HirShabelle ayaa shalay kulan uu la qaatay inta badan musharixiinta u taagan 11-ka kursi ee ku harsan magaalada Beledweyne ayaa u cadeeyay in uusan marnaba yeeli doonin in la kala xigsado musharaxiinta. ayaa u caddeeyey mowqifkiisa.
Kulankaas ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka HirShabelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) kaasi oo diidan in kuraassta la furo, waxayna warar la helayo sheegayaan inuu weli diidan yahay go’aanka uu ku adkeystay Guudlaawe.
Dabageed ayaa ku xiran Villa Somalia, oo dooneysa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobolka aanay dib ugu soo laaban Golaha Shacabka.
Madaxweynaha HirShabelle ayaa musharixiinta ka codsaday inay xaaladda dajiyaan, islamarkaana ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga Beledweyne inta ay ka dhaceyso doorashada.
Musharixiinta ayaa isla shalay aqbalay codsiga madaxweynaha HirShabelle, waxayna sidoo kale uga mahad celiyeen inuu ku adkeystay go’aankiisa xilli ku xigeenkiisa uu rabo in la boobo kuraasta harsan.
Si kastaba, Kooxda Farmaajo ayaa isku dayeysa xiligaan sidii ay Beledweyne uga soo saaran laheyd dad gaar ah oo ay wadato, taasi oo ka hor-imaneysa ballan-qaadkii uu madaxweyne Guudlaawe ka sameeyay safarkiisi u horeeyay ee uu ku tagay Beledweyne.